पूर्व मिस नेपाल सदीक्षा: पढाइमा अब्बल, व्यापारमा सबल - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कृष्ण आचार्य २० मंसिर
पूर्व मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठ
‘फिल्म हेर्दा कहिलेकहीँ त खेलौँ–खेलौँ पनि लाग्छ। तर अब फिल्मलाई दिने समय छैन’, उनी भन्छिन्।
‘सोचाइ मान्छेअनुसार फरक–फरक हुन्छ र सोहीअनुसार मानिसहरु व्यवहार गर्छन्’ मिस नेपाल–२०१० सदीक्षा श्रेष्ठ सुनाउँछिन्।
यही फरक सोचाइका कारण मिस नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सबैमा फरक–फरक रहेको उनको बुझाइ छ। अरुजस्तै उनले मिस नेपालको उपाधि हात पार्दा पनि थुप्रै टीका–टिप्पणी भए। यसरी व्यक्तिप्रतिको धारणा बनाउनु गलत हो भन्ने बुझाईमा सदीक्षा स्पष्ट छिन्।
‘कसैको जजमेन्ट गर्नुछ भने कम्तिमा पनि एक वर्ष उसलाई फलो गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘तर यहाँ एक–दुई दिनमा, एक–दुई महिनामा धारणा बनाइन्छ।’ यो उनको भोगाइ हो।
त्यतिबेला ‘अब यसले म्युजिक भिडियो खेल्छे, फिल्म खेल्छे’ भन्नेहरु थुप्रै थिए। तर सदीक्षालाई त्यतातिर रुचि थिएन।
सदीक्षाको अनुभवमा मिस नेपालको ताजसँगै थुप्रै अवसरहरु पनि आउँछन्। तर आफू कुन बाटो हिँड्ने ? त्यो आफैँले तय गर्ने हो। एउटा त्यस्तो बाटो जहाँ हिँड्दा आनन्द आउँछ, जीवनयापनका लागि प्रशस्त पैसा कमाइ हुन्छ।
अहिले उनी आफूले रोजेको त्यस्तै जीवन बाँचिरहेकी छिन्। र त्यो मोडलिङ वा सिनेमा होइन।
डाक्टर पढ्न दु:ख धेरै
सदीक्षाले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म (१३ वर्ष) मीनभवनस्थित एनके सिंह मेमोरियल (इपिएस) स्कूल पढिन्। सानैदेखि पढाइमा तीक्ष्ण उनी स्कुलमा कहिल्यै दोस्रो भइनन्। उनको घरमा अहिले पनि पढाइमा राम्रो गरेर प्राप्त गरेका उपहारको चाङ छ।
एसएलसीमा डिस्टिङ्न्सन ल्याएपछि उनले सेन्जिभियर्स कलेज माइतीघरमा साइन्स पढिन्। प्राय: आईएस्सीमा राम्रो गर्नेहरुको सपना डाक्टर बन्ने हुन्छ। उनले पनि पहिला सोचेकी थिइन्।
आईएस्सी परीक्षा सकेर त्यसै बसिरहेका बेला पत्रिकामा मिस नेपालको विज्ञापन देखिन्। विज्ञापनमा बिजेताले गाडी उपहार पाउने कुरा उल्लेख थियो। ‘मेरो गाडीमा चढ्ने मन छ?’, आमालाई जिस्क्याउँदै सदीक्षाले विज्ञापन सुनाइन्। ख्यालठट्टामै मिस नेपालको आवेदन भरिन्। रमाइलो गर्दै आवेदन हालेकी उनी धेरैलाई आश्चर्य पार्दै सन् २०१० को मिस नेपाल नै भइन्।
अहिले धेरैले उनलाई मिस नेपाल बनेका कारण साइन्स नपढेको होला भन्ने ठान्छन्। ‘कुरा त्यस्तो होइन’, उनी भन्छिन्।
के हो त ?
पढ्ने क्रममा उनले आफूभन्दा सिनियरहरुले डाक्टर पढ्दा पाएको दुःख देखेकी रहिछन्। त्यसबाट उनको डाक्टरी अध्ययन गर्ने रहर मरेछ। ‘म मिहिनेती र रमाइलो खालको छु। त्यसैले डाक्टर बन्ने मन लागेनँ। अनि सेन्ट जेभियर्समै बीबीएस भर्ना गरेँ’, उनी सुनाउँछिन्।
मिस नेपालको ताज, बीबीएससम्मको अध्ययन पूरा गरेकी उनलाई एउटा विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्री पाउने इच्छा जाग्नु स्वभाविकै थियो। त्यसका लागि उनले परिवारलाई फकाइन्। परिवारको सहमतिपछि झन्डै २२ पेजको आवेदन भरेर थाइल्याण्डको युनिभर्सिटीमा दरखास्त दिइन्। आंशिक छात्रवृत्तिमा उनको नाम निस्कियो। एमबिए गर्न उनी थाइल्याण्ड उडिन्।
विद्यालय तहदेखि नै लगनशील उनले दिनरात मेहनत गरिन्। ६ घण्टा कलेजको पढाई र घरमा आएर फेरि गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले पढाइका लागि बाहेक अतिरिक्त समय हुँदैनथ्यो। निरन्तरको पढाई र गृहकार्यले दिमाग बोझिलो पार्थ्याे। राति अबेरसम्म बसेर पढ्दा निद्रा पुग्दैनथ्यो। यो गाह्रो तालिकाबाट उनी बिचलित भइनन्। ‘स्कूलदेखि नै म मिहिनेती हुँ। त्यसैले त्यो हेक्टिक सेड्युलमै मैले इन्जोए गरेँ’, उनी सुनाउँछिन्।
सदीक्षा विश्वविद्यालय टपर
सदीक्षाको जीवनमा मिस नेपाल एउटा महत्वपूर्ण फड्को थियो। एशिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको टपर हुनु जीवनकाे दोस्रो घुम्ती बन्यो।
सदीक्षा बुवासँग निकै नजिक छिन्। स्कुल र कलेजमा ‘आउट स्ट्यान्डिङ स्टूडेन्ट अवार्ड’ पाएकी उनलाई बाबुले बेलाबेला भनिरहन्थे, ‘छोरी अब पनि अवार्ड पाउँछौँ होला नि?’ सदीक्षा विदेशको पढाई निकै गाह्रो भएको र प्रतिस्पर्धा कठिन भएकाले सम्भावना कम रहेको बताउँथिन्।
विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको निर्धारित भएपछि विद्यार्थीलाई उपस्थितिका सूचना गरियो। दीक्षान्तमा सहभागी हुनेहरुको नाम भित्तामा टाँसिएको थियो। निर्देशनअनुसार दीक्षान्त समारोहमा सबै नामअनुसार बस्नुपर्छ भन्ने थियो। उनले रोमनका आधारमा आफ्नो नाम खोजिन्। सदीक्षा श्रेष्ठ अर्थात् एसबाट उनले आफ्नो सिट खोजिन्। त्यहाँ उनको नाम थिएन। ‘एक छिन त झसङ्ग भएँ’, उनी सुनाउँछिन्, ‘मेरो नाम त सबैभन्दा अगाडि पो रहेछ।’
यस्तो कसरी भयो भनेर सोध्दा अवार्ड पाउनेहरुको नाम अगाडि हुन्छ भन्ने जानकारी पाइन्। उनी बल्ल यकिन भइन्, त्यो पहिलो नम्बरमा रहेको नाम आफ्नै हो। ‘तर मैले बुबा आमासँग आफू टपर भएको कुरा शेयर गरिँन’, उनी भन्छिन्, ‘त्यो दीक्षान्त समारोहको अघिल्लो दिनको कुरा थियो।’
जब बुवाले सदीक्षा टपर भएको थहा पाए उनको खुसीको सीमा रहेन।
‘विदेश पढ्न जाने अवसर पाएर पनि म त्यहाँ घुमेर, रमाइलो गरेर बसेको भए मैले केही गर्न सक्ने थिइनँ नि’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो कडा मेहिनेत, लगनशीता र परिश्रमकै फल हो।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सदीक्षालार्इ नेपाल विद्याभुषण प्रदान गर्दै
राष्ट्रपतिसँगको त्यो संयोग
‘जीवनभर मिस नेपालको छाप पर्ने त होइन ?’ मिस नेपाल भइसकेपछि सदीक्षामा एउटा डर थियो। यो प्रश्नले उनलाई घचघच्याइरहन्थ्यो। कहिले कहीँ आफ्नै परिचयसँग पनि डर लाग्थ्यो। तर उनी निराश भने हुन्नथिन्। अझ धेरै गर्नुछ भन्ने लागिरहन्थ्यो।
स्नातकोत्तर तहमा नेपाल र विदेशका विश्वविद्यालयबाट टप गर्नेहरुलाई सरकारले हरेक वर्ष विद्याभूषण पदक दिन्छ। टपर उनले जब राष्ट्रपति विदादेवी भण्डारीको हातबाट विद्याभूषण पदक (सन् २०१७) पाइन् तब उनलाई आफूले केही गरेर देखाएजस्तो लाग्यो। ‘त्यतिबेला मलाई एउटा फरक अनुभूति पनि भयो। मान्छेहरु भन्ने गर्थे यति सानै उमेरमा मिस नेपाल भई। अब यसले के नै गर्न सक्ली र? म्युजिक भिडियो, फिल्मसिल्म खेल्ने त होला’, उनी सुनाउँछिन्, ‘उनीहरुलाई व्यवहारिक हिसाबले जवाफ फर्काएजस्तो भान भयो।’ राष्ट्रपतिको हातबाट अवार्ड थापेको तस्विर मिडियामा छाएपछि उनकाे नामकाे पछाडि अर्को विशेषण थपिएको छ, ‘ब्यूटी विथ ब्रेन’।
सदीक्षाले मिस नेपाल हुनुभन्दा तीन महिनाअघि ‘वाउ म्यागेजिन’ ले गर्ने ‘भाउ टप १० कलेज विमेन कम्पिटिसन’ जितेकी थिइन्। त्यतिबेला विद्यादेवी भण्डारी रक्षामन्त्री थिइन्। उनले नै सदीक्षालाई मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्। त्यसको ८ वर्षपछि राष्ट्राध्यक्षबाट विद्याभूषण थाप्न जाँदा उनै विद्या भण्डारी नेपालको राष्ट्रपति थिइन्।
सदीक्षाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई यसबारे याद भए नभएको सोधिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले याद भएको बताइन्। त्यसपछि सदीक्षा थप उत्साही भइन्। अहिले पनि उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा राष्ट्रपतिलाई भेटिरहन्छिन्। समयले साथ दिए बाेलचाल हुन्छ।
‘बिजनेस डिल गर्न मज्जा लाग्छ’
मोडलिङ र फिल्ममा प्रवेश नगरेकी सदीक्षा जर्मन गाडी ‘फोक्स वागन’को आधिकारिक विक्रेता पूजा इन्टरनेशनलको ब्रान्ड म्यानेजर हुन्। यो गाडीका लागि नेपालमा विजनेश प्लान बनाउनेदेखि मिडिया डिल गर्नेसम्मको जिम्मेवारी उनको काँधमा छ। यसबाट उनले मनग्गे पैसा पाउँछिन्।
यो बाहेक सौन्दर्य उत्पादनको व्यापारमा पनि सदीक्षा संलग्न छिन्। थाई ब्रान्ड सिवानी कलर्सकाे नेपालको व्यापार उनले हेर्छिन्। यो कम्पनीका कस्मेटिक विश्वकै कस्मेटिक हबहरु ताइवान र कोरियामा तयार हुन्छन्। सस्तो र सुलभ पनि रहेको उनको भनाइ छ। यो उनको आफ्नै व्यवसाय हो। थाइल्याण्डमा पढ्दा त्यहाँ आफूले प्रयोग गरेको ब्राण्ड पछि नेपाल भित्राएको उनी बताउँछिन्। जागिरबाट बचेको समय उनले व्यापारलाई दिने गरेकी छिन्। ‘कामबाहेक मेरो डिक्सनरीमा अरु केही छैन। म यसमै इन्जोय गरिरहेकी छु’ उनी मुस्कुराउँछिन्।
आफूमा पहिल्यैदेखि मार्केटिङमा रुची भएकाले सफल भएको सदीक्षाको भनाइ छ। ‘मानिसहरुसँग बोल्न, कुनै कुरा डिल गर्न विछिट्टै आनन्द आउँछ नि।’
सदीक्षा नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीको सद्भावना दूत हुन्। सन् २०१० मा विश्व वन्यजन्तु संरक्षण र नेपाल पर्यटन वर्ष – २०११ को सद्भावना दूत भइसकेकी उनी वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन उत्साही हुन्छिन्।
‘आफ्नो केही समय दिएर, एउटा फोटो खिचेर होस् वा अन्य कुनै मध्यमबाट कसैमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ भने किन नगर्ने ?’, उनी भन्छिन्। व्यापारिकभन्दा सामाजिक काममा संलग्न हुन पाउँदा उनलाई बढी सन्तुष्टि लाग्छ।
हुन त उनी मिस नेपाल नभएको भए यी अवसरले नपछ्याउन पनि सक्थे। भन्छिन्, ‘अवसरले मात्र पनि केही हुँदैन। आफूमा रुचि पनि हुनुपर्छ। जुन रुचिका कारण मभित्र देश र समाजका लागि केही गरौँ भन्ने भावना जागृत भइरहन्छ।’
टाउकोमा ताज, हातमा शक्ति नभए पनि नागरिकमा देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
आफ्नै भोगाइसँग हाँस्छु
सदीक्षा ‘भाउ टप १० कलेज विमेन कम्पिटिसन’ विजेता भइसकेपछि पहिलो पटक फिल्मको अफर आएको थियो। उनले रुचि देखाइनन्। मिस नेपाल भइसकेपछि निर्देशकहरुको लर्को नै लाग्यो। तापनि उनको मन फर्किएन। ‘म अरु नै कुरामा इन्जोय गरिरहेकी छु। यो नै मेरो रुचिको फिल्ड हो’, उनी भन्छिन्।
पछिल्लो समय राम्रा–राम्रा नेपाली फिल्म बन्दै गएको उनले देखेकी छिन्। ‘फिल्म हेर्दा कहिलेकहीँ त खेलौँ–खेलौँ पनि लाग्छ। तर अब फिल्मलाई दिने समय छैन’, उनी भन्छिन्, ‘फेरि तीन–चार महिना कताकता डुलेर निर्देशकले रोऊ भन्दा रुने र हाँस भन्दा हाँस्ने बानी लाउन सजिलो पनि छैन।’
‘बरु आफ्नै जीवन भोगाइसँग रुन्छु, हाँस्छु’, उनी सुनाउँछिन्, ‘फेरि मेरा सपना पनि त धेरै छैनन्। राम्रो परिवार, चाहेको ठाउँमा घुम्न जान र जीवनलाई रमाइलो बनाउन पाइयोस्। बस्!’
प्रकाशित २० मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-12-06 08:52:30